वित्तीय लागि आध्यात्मिक युद्ध प्रार्थना प्रार्थना अंकहरू
घर प्रार्थना आध्यात्मिक युद्धका लागि आर्थिक प्रार्थना
आध्यात्मिक युद्धका लागि आर्थिक प्रार्थना
वित्तियका लागि केही आध्यात्मिक युद्धका प्रार्थनाहरू मार्फत हामी तपाईंहरूलाई हेरौं। अघिल्लो हप्ता मैले सोशल मिडिया पोस्टहरू पढें कि गरीबी आगोले मरेन; केवल वास्तविक हसलले गरीबीलाई मार्न सक्छ। धेरै मानिसहरू यस विश्वासका साथ दैनिक बाहिर जान्छन्, र तिनीहरूले प्रार्थनाको स्थान बिर्सन्छन्। के धेरै व्यक्तिहरूले बुझ्न असफल हुन्छन् कि आत्मिकले शारीरिक नियन्त्रण गर्दछ, र आत्मिक संसारमा स्थायी नभएको भौतिकमा केही पनि हुँदैन।
हाम्रो विश्वास र आध्यात्मिकताको बेदीमा मुक्ति जति नै हाम्रो जीवनको चिन्ताको विषय हो। हामी आत्माको क्षेत्रबाट शुल्क लिन्छौं र शारीरिकमा प्रकट गर्दछौं। हाम्रो वित्त, उदाहरणका लागि, आत्मा को क्षेत्र बाट व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, र हामी चीज भौतिक मा पूरा। अथवा के तपाईंले धर्मशास्त्रको अंश पढ्नुभएको छैन कि यसले भन्छ कि मेरा परमेश्वरले मेरो सबै खाँचोहरू येशू ख्रीष्टमार्फत महिमामा पाउनुहुनेछ।
प्रायः, हाम्रो वित्तको अभिव्यक्ति र सफलता ढिलाइ हुन सक्छ वा केही नदेखिने शक्तिहरूले रोक्न सक्छन्। धेरै हदसम्म, वित्तीय सफलता भनेको सफलता र धनको जम्मा गर्नु हो। गधा वर्ष, याकूब अथक र अझै सम्म काम गर्दै थियो। उसले देखाउनको लागि थोरै मात्र परिणाम थियो। त्यहाँ याकूबको जीवनमा आशिष् र सफलताको करार रहेको थियो, तर यसको बाबजुद पनि उनी विफलता र डरमा आफ्ना सबै अनुभवहरू जिउँदै थिए। यदि गरिबी निवारणको निम्ति हलचल समाधान नै भएको भए याकूबको सहायता बिना परमेश्वर यति धनी हुनुभयो होला। सर्वशक्तिमान परमेश्वरको हस्तक्षेपबिना जाबेज आफ्नो चढाईमा सबैभन्दा धनी व्यक्तिहरूमध्ये एक हुने थिए।
यी सबै दृष्टान्तहरू केवल हामीलाई प्रमाणित गर्नका लागि कि प्रार्थना पनि गरीबीको समाधान हो जति नै हडताल छ। त्यसकारण, जब तपाईं आर्थिक सफलताको लागि एक बिन्दुमा कडा हडताल गर्नुहुन्छ, प्रार्थनाको वेदीमा आगो कहिल्यै चिसो हुन नदिनुहोस्। सकेसम्म प्रार्थना गर्नुहोस्।
यदि तपाईं आफ्नो वित्तीय को लागी लगनका साथ युद्धका लागि प्रार्थना चाहिन्छ भने, अगाडी नहेर्नुहोस्, हामीले वित्तीयका लागि शक्तिशाली युद्ध प्रार्थनाको एक सूची कम्पाइल गरेका छौं।
प्रभु येशू, तपाईं सर्वशक्तिमान् परमेश्वर हुनुहुन्छ, म तपाईंको वित्तीय हातहरू तपाईंको योग्य हातमा दिन्छु, तपाईंले प्रार्थना गर्नुभयो कि तपाईंले यसलाई अपलोड गर्नुभयो। म मेरो वित्तको माथिल्लो प्रवाहलाई असर गर्ने प्रत्येक नकारात्मक असंतुलनको बिरूद्ध आउँछु। म तिनीहरूलाई येशूको नाममा नष्ट।
प्रभु परमेश्वर, धर्मशास्त्रले मलाई विश्वस्त तुल्यायो कि ख्रीष्ट येशू मार्फत महिमाका निम्ति आफ्ना आवश्यक चीजहरू अनुसार तिमी मेरो आवश्यकताहरू पूरा गर्नेछौ। म मेरो वित्त मा तपाइँको अलौकिक शक्ति को लागी प्रार्थना गर्दछु। तपाईंको नाम सकारात्मकता को हात मेरो नाम मा येशूको नाम मा आराम गरौं।
म मेरो वित्त भूतको पासोबाट मुक्त गर्छु। प्रत्येक अधिकार भूतले मेरो वित्त मा नियंत्रण ले, म येशूको नाममा तिनीहरूलाई नष्ट।
हे परमेश्वर, तपाईं सबै सम्भावनाहरूका परमेश्वर हुनुहुन्छ, र मलाई थाहा छ कि तपाईसँग केही पनि असम्भव हुन सक्दैन। म स्वर्गको अधिकारबाट फरमान गर्दछु कि मेरो नकारात्मक आक्रमण गर्ने मेरो षडयन्त्र गर्ने मेरो आर्थिक अवस्थालाई येशूको नाममा आगोले नष्ट गर्दछ।
प्रभु येशू, तपाईंले हामीलाई सृष्टि गरिएका सबै थोकमाथि प्रभुत्व दिनु भएको छ। म येशूको नाममा पैसाको दास हुन अस्वीकार गर्छु। म पैसा मा मेरो अधिकार प्राप्त गर्दछ। म मेरो वित्त को कब्जा लिन्छु। म मेरो नाममा येशूको नाममा शैतानको नियन्त्रणबाट मेरो वित्तीय स्वतन्त्र।
म स्वर्गको अधिकारबाट आदेश दिन्छु कि अबदेखि मेरो वित्तीय को माथिल्लो प्रवाह शैतानले असर गर्ने छैन। पवित्र आत्माको आगोले सबै शक्तिलाई नष्ट पार्छ जुन मलाई हात्तीको रूपमा काम गरिरहेको छ र मलाई कमिलाको जस्तो खान दिन्छ।
हे भगवान, म तपाईको दयाबाट मेरो आर्थिक देखभाल कसरी गर्ने भनेर सिकाउनेछु भनेर म प्रार्थना गर्दछु। धर्मशास्त्रले हामीलाई बुझाउँछ कि हरेक राम्रो विचार तपाईबाट आउँदछ। म प्रार्थना गर्दछु कि तपाईं मेरो हात मा सम्पत्ति कसरी बनाउने मार्गदर्शन गर्नुहोस्। र तपाईं मलाई कसरी येशूको नाममा सम्पत्ति व्यवस्थापन र सम्भार गर्न सिकाउनुहुनेछ।
म गरिबीको हरेक भावनाको बिरूद्ध आउने छु जुन मेरो वित्तियता लिन चाहन्छ। म येशूको नाम मा त्यस्ता शक्तिहरू नष्ट।
प्रभु, म मेरो आर्थिक चिन्ता र बोझ तपाईंमा राख्छु, येशू। किनकि यो लेखिएको छ, मत्ती ११: २-11--28० हे सबै थोरै मानिस हो! भारी बोझले दबिएका हो! मकहाँ आओ, म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु। मेरो जुवा तिमी आफैले बोक, र मसँग सिक। किनकि म विनम्र र नम्र हृदयको छु। अनि तिमीहरूले आफ्ना आत्मामा विश्राम पाउनेछौ। किनकि मेरो जुवा सजिलो र मेरो भारी हलुका छ। म तिमीमा आराम गर्न खोज्छु, येशू। म आदेश दिन्छु कि मैले येशूको नाममा आर्थिक पोषण प्राप्त गरेको छु।
म डिक्री गर्छु कि मेरो सबै आर्थिक समस्या समाप्त भयो; मेरो पर्खाइ समाप्त भएको छ गवाहीको यो युग। म आदेश दिन्छु कि येशूको नाममा शक्तिले मेरा हातहरूले धन कमाउन थाल्छन्, म आदेश दिन्छु कि मेरो आर्थिक बोझ येशूको नाममा उठाइएको छ।
म पैसामा मेरो प्रभुत्व जमाउँछु। जब म कल गर्दछु, पैसा जवाफ दिनेछ। म येशूको नाममा पैसाको दास हुन अस्वीकार गर्छु। म अब्राहमको आशिष्को परिष्कृत आयाममा ट्याप गर्छु। म उसको भाग्यमा ट्याप गर्छु, र म लुकेका खजानाहरू अनलक गर्न सुरू गर्छु,
म मेरो नाममा मेरो लुकेका सबै खजानाहरू छोडिदिन्छु।
म आफैंलाई सबै पुरुष र महिलासँग जोड्दछु जो मलाई आर्थिक रूपमा माथि उठाउने लक्ष्य राखिएको छ। म येशू को नाम मा एक यस्तो व्यक्ति संग आफूलाई संलग्न।
म आदेश दिन्छु कि येशूको नाममा, सबै शक्तिशाली मानिस वा महिला जो आर्थिक पैसा बसेका थिए येशूको नाममा आगो सल्काउँछन्। पवित्र आत्माको आगोले मेरो जीवनलाई येशूको नाममा आराम गर्न इन्कार गरेको प्रत्येक राक्षसी राक्षसलाई जलाउन थाल्छ।
म आध्यात्मिक क्षेत्रमा मेरो वित्त पोषण गर्दै छन् कि हरेक कीट र सलह नष्ट। म आदेश दिन्छु कि उनीहरूले येशूको नाममा आगो लगाए।
मेरो पसिना चोरेर शैतानले पठाएको प्रत्येक राक्षसी प्राणी, म येशूका नाममा उनीहरूले आगो जलाउने आदेश दिन्छु।
अघिल्लो लेखमायुद्धका प्रार्थना र धर्मशास्त्र
अर्को लेखमापापबाट छुटकारा पाउनको लागि प्रार्थना
जोसेफ टेंबो जुलाई,, २०२० बिहान १०::9 बिहान
सपनामा लडाई विरुद्ध प्रार्थना।
२०११ मा प्रार्थना गर्नका लागि दस कुराहरु
दैनिक बाइबल पढाइ आज अक्टुबर २१ २०१।
Household० शक्तिशाली प्रार्थना पोइन्टस् घरेलु बोक्सीविद्याको बिरूद्ध
डिसेम्बर 13, 2018